Garuda Linux: An Arch Linux-yakavakirwa Rolling Kuburitswa Kugovera | Kubva kuLinux
Kwemakore angangoita gumi nemashanu ndaziva nezve iyo Kugoverwa kweGNU / Linux. Kusangana kwandakaita kekutanga nemumwe wavo kwaive Knoppix 5.X, iyo yakauya nayo KDE 3.5 Desktop Nharaunda. Kubva ipapo ndakaziva uye ndashandisa mukutevedzana, mamwe mazhinji akadai se: OpenSuse, Ubuntu, Debian uye MX Linux.
Uye dzinenge nguva dzose kushandisa iyo KDE uye Plasma Desktop Nharaunda o XFCE. Sezvo, kubva pane yangu maonero uye zvazvino nhanho yechiitiko, Plasma ndeimwe yeakanaka kwazvo uye akakwana, uye XFCE chimwe cheyakareruka uye chinoshanduka-chinja. Uye ini ndinofunga kuti chero yeizvi mune GNU / Linux Distro, inogona kuita zvishamiso. Uye kutaura nezve GNU / Linux Distros nePlasma, mazuva apfuura ndakasangana nhare "Garuda Linux", iyo yandakawana inoyevedza uye yakanaka «Distro Kutenderera Kuburitswa» maererano ne Arch Linux.
Sezvo, ya "Garuda Linux" hatina kumbobvira takurukura zvakadzama mu "KubvaLinux", hatina kumbobvira takurudzira zvinyorwa zvekukoka iwe kuti uverenge, uye sezvingadaro, kune vakawanda "Garuda Linux" Izvo zvakare hazvizivikanwe, tinokukoka iwe kuti uverenge chinyorwa chakapfuura, nevamwe vamwe GNU / Linux Distros zvishoma zvinozivikanwa.
"Ivo vanogona kuona vamwe Kugoverwa kweGNU / Linux of the "DistroWatch Kumirira Chinyorwa" kudzvanya rinotevera link uye tarisa chikamu chiri pasi petsananguro muChirungu pazasi: "Kugoverwa paRwendo Rwakamirira ". Ipo, kana iwe uchida kutsvaga mamwe maviri, mashoma anozivikanwa uye asina kunyorwa Distros, tinokurudzira kudzvanya pane anotevera maviri ma link: 1 Ungano y 2 Ungano." Zvishoma-zvinozivikanwa kugoverwa kweGNU / Linux kwete muDistroWatch
1 Garuda Linux: An Arch Linux - Rolling Kuburitswa
1.1 Chii chinonzi Garuda Linux?
1.2 Mhando huru
1.3 Zvimwe zvinobatsira maficha
Garuda Linux: An Arch Linux - Rolling Kuburitswa
Chii chinonzi Garuda Linux?
Zvinoenderana neyako zviri pamutemo webhusaiti, ndizvo:
"Iyo Arch Linux-yakavakirwa Rolling Kuburitswa kugovera iyo inovimbisa iwe nguva dzose kuwana yazvino software yekuvandudza. Izvo zvakare zvine yekuwedzera yekuchengetera pamusoro peArch Linux repositories, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tirege kuisa system kuburikidza neterminal (CLI)."
Pakati pezvinhu zvikuru zvakasimbiswa nevakagadziri vacho zvinotevera:
Uchishandisa Zen Kernel: Izvo zvinopa kukurumidza kukuru uye kupindura kukuru, sezvo zvakagadzirirwa kushandiswa kwezuva nezuva pane desktop, uye munzvimbo dzemultimedia nemitambo. Kuisirwa uye kushandiswa kwayo yaive mhedzisiro yekudyidzana kernel hacker kuyedza kupa yakanakisa Linux kernel yezuva nezuva yekushandisa system.
Kunakidzwa kwekushandiswa: Inopa maTeminal maapplication emazuva ano (CLI), akadai se "Micro", inova yekupedzisira-yakavakirwa mameseji edhitaimu iyo iri nyore kushandisa uye inonzwisisika, uye yakafanotemerwa muIye Inoshanda Sisitimu, sezvo ichibvumidza kutora mukana weanogona eazvino zviteshi. Uye zvakare, inopa akati wandei GUI maturusi ekugadzirisa masisitimu ekugadzirisa kunze kwebhokisi kuti zvive nyore kutanga
Nguva dzose wakasununguka: Vagadziri vayo vanovimbisa kuti Garuda Linux ichagara yakasununguka zvachose. Sezvo, ivo vakaigadzira kuti ive yemahara uye yakavhurika Inoshanda Sisitimu yakavakirwa paGNU / Linux, uye pamusoro pezvose, zviri nyore kushandisa, yakanaka uye inopa kuita kwakanyanya.
Zvimwe zvinobatsira maficha
Zvimwewo zvinhu izvo zvinogona kutaurwa muchidimbu ndeizvi:
Shandisa BTRFS seyakagadzika faira sisitimu ine zstd compression.
Iyo inobvumidza iyo kuronga uye kuitisa otomatiki Snapshots kuburikidza neiyo Timeshift application.
Iyo ine hushamwari yekumisikidza maitiro, zvichibva pakushandiswa kweCalamares Installer, iri nyore kushandisa uye inomhanyisa maitiro ekumisikidza.
Iyo inopa kuisirwa kwayo uye shandisa anotevera Desktop Mamiriro uye Mahwindo Mahofisi: KDE Plasma, GNOME, Xfce, Cinnamon, MATE, LXQt-kwin, Wayfire, Qtile, BSPWM uye i3wm.
Pasi peKDE Plasma Desktop Yemamiriro ekunze, inouya nemubatanidzwa wakanakisa wedesktop dzakasarudzika madingindira, inokwezva girafu rinotaridzika, uye yakanaka kunze-kwe-kwebhokisi blur mhedzisiro.
Inosanganisira akasiyana graphical interfaces (GUI) emabasa akasiyana siyana, akadai se: Package manejimendi (Pamac), manejimendi evatyairi uye tsanga (Garuda Zvirongwa maneja), manejimendi emabasa akasiyana siyana (Garuda Assistant), manejimendi yesarudzo GRUB bhatani sarudzo (Garuda) Boot Sarudzo), samambure ekubatanidza manejimendi uye yekuwana poindi yekugadzira (Garuda Network Mubatsiri), uye pakupedzisira, imwe yemitambo software yekuisa (Garuda Gamer).
Nezve kurodha pasi kwako, zvinonakidza uye zvakanaka «Distro Kutenderera Kuburitswa» iyo yakavakirwa pa Arch Linux inopa, yakapusa kurodha chikamu, kubva kwaunogona kudzikisa iyo Inokodzera ISOkureva iyo ISO ine iyo Desktop Nzvimbo y Mahwindo Mamaneja yezvatinoda, pakati pezviripo: KDE Plasma, GNOME, Xfce, Cinnamon, MATE, LXQt-kwin, Wayfire, Qtile, BSPWM uye i3wm.
Mushure mekuona mavhidhiyo akati wandei ayo, akatenda kuti ichave iri imwe nzira yakanaka kune GNU / Linux Distro kune avo vanoda Arch Linux, yakawanda kana yakawanda sezvazviri Manjaro. Kana vaine komputa yemazuvano neyekuchengetedza Hardware Zvishandiso (RAM, ROM uye CPU) iyo yakanaka ndeyekuyedza nayo PlasmaSezvo, ndine chokwadi chekuti vazhinji vachada iyi yakanaka Inoshanda Sisitimu uye yayo inoshamisa default uye inowanikwa mhedzisiro.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «Garuda Linux», inoyevedza uye yakanaka «Distro Kutenderera Kuburitswa» iyo yakavakirwa pa Arch Linux, iyo yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa uye yakagadzirirwa kuitira kwakanyanya kuita; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Garuda Linux: An Arch Linux-yakavakirwa Rolling Kuburitswa Kugovaniswa
Carlos Solano akadaro
Ndatenda zvikuru nechinyorwa ichi! Ndiri kufarira kuyedza: Ehe, ndakaitora pasi neGnome desktop.
Kwazisai, Carlos. Ndatenda nekutaura kwako uye tinovimba unoifarira zvakanyanya uye kuti Garuda Distro ichakubatsira zvakanyanya.